Democratic Alliance - Wikipedia
UJohn Steenhuisen, umholi wesikhashana we-DA
i-Democratic Alliance (DA) yiqembu lezepolitiki laseNingizimu Afrika kanye neqembu eliphikisayo eliphambili kwi-African National Congress ebusayo. Iqembu njengamanje liholwa nguJohn Steenhuisen okwesikhashana.
UHelen Zille, uPatricia de Lille noLindiwe Mazibuko bakha amaphosta e-DA ngaphambi kokhetho lwango-2011
Iqembu lelo libusa Ntshonalanga Kapa kanye nomasipala abaningana e-Ningizimu Afrika yonkana.
Iphathi likhululekile futhi likhulu kakhulu. Ililunga leLiberal International ne-Africa Liberal Network. I-DA isusa izimpande zayo ekusungulweni kweqembu eliphikisana nobandlululo ngonyaka we-1959, ngokuhlangana okuningi kanye nokushintshwa kwamagama phakathi kwalesosikhathi nokwamanje.
Iqembu leDemocratic Party neNew National Party lahlangana ukwenza iDA emuva ngo-2000, nokho iDA ibikade inezindlela eziningi. UTony Leon ubengumholi wokuqala we-DA. Wasebenza kuze kube ngu-2007 lapho alandelwa nguHelen Zille. UZille uthathe umhlalaphansi njengomholi ngonyaka ka-2015 kwathi uMmusi Maimane wangena esikhundleni sakhe waba ngumholi wokuqala omnyama we-DA. UMaimane washiya isikhundla ngo-2019 kwathi uJohn Steenhuisen wangena esikhundleni sakhe.
↑ Iwebhusayithi esemthethweni
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Democratic_Alliance&oldid=56561"
Amaqembu ezombusazwe aseNingizimu Afrika
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-19 uNdasa 2020, nge-19:41.